कर्णालीमा सरकारका लागि बजेटविना ६४ गाडी खरिद तर, जनताका लागि एम्बुलेन्स किन्न विनियोजित बजेट फ्रिज
२०७६ भदौ १५ आइतबार ०६:३७:००
हुम्लाले एम्बुलेन्स किन्यो, तर सडक सञ्जालले छोएकै छैन, त्यसैले एम्बुलेन्स काठमाडौंस्थित कम्पनीमै
डोल्पाले एम्बुलेन्स किन्यो, तर हिउँद र वर्षा गरी नौ महिना गाडी चल्दैन त्यसैले सुर्खेतमा थन्किएको छ
कर्णालीका दूरदराजका नागरिकलाई सिंहदरबारको सुविधा पुर्‍याउने जिम्मा लिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको बजेट नै सुविधाको गाडी खरिदमा खर्च गरेको छ । गत वर्ष मन्त्रालयलाई गाडी खरिदको कार्यक्रम नै नराखेको सरकारले विकासको २१ करोड बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गरेर ६४ वटा गाडी खरिद गरेको हो ।
औषधि छैन, तर अस्पतालमै ६० लाखको हेलिप्याड
हुम्ला जिल्ला अस्पतालबाट सिमकोट एयरपोर्ट पुग्न गाडीलाई ढिलोमा १० मिनेट लाग्छ । तर, प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्रीको पहलमा हुम्ला जिल्ला अस्पतालमा गत वर्ष ६० लाख खर्चेर हेलिप्याड बनाइयो । मन्त्री दल रावल गम्भीर बिरामीलाई तत्काल उपचारका लागि अस्पतालमै हेलिप्याड बनाएको बताउँछन् । तर, अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति र औषधि छैनन् ।
हुम्ला अस्पतालमा दुईजना एमबिबिएस डक्टरको स्थायी दरबन्दी रहेकोमा एकजना मात्र उपलब्ध छन् । तीन नर्सको दरबन्दी भए पनि दुईजना मात्रै छन् । हुम्लाका अधिकांश स्वास्थ्य चौकीमा औषधि र स्वास्थ्यकर्मी अभाव छ ।
प्रदेश सरकारका कुन मन्त्रालयले कति गाडी किने ?
१. सामाजिक विकास मन्त्रालय
७१ लाख दरका दुईवटा स्कार्पियो
दुई पिकअप भ्यान ७६ लाखमा खरिद
कालिकोट जिल्ला अस्पतालका लागि दुई, हुम्ला र डोल्पाका लागि एक–एक गरी चारवटा एम्बुलेन्स खरिद । प्रतिएम्बुलेन्स १६ लाख विनियोजन ।
हुम्ला र डोल्पामा सडक सञ्चालन भएको छैन । त्यहाँका लागि एम्बुलेन्स किनिएको छ, तर सडक सञ्जालले छोएका सात जिल्ला अस्पतालको एम्बुलेन्सको रकम फ्रिज ।
१६ वटा गाडी खरिद
प्रहरीका लागि दुईवटा ट्रक
टाटा जेनुन दुईवटा
बोलेरो क्याम्पर आठवटा
टाटा सफारी दुईवटा
दुई चरणमा गरी १६ वटा गाडी खरिद गरिएको । त्यसमध्ये १० वटा प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको, स्कार्पियो फाइभएस एक मुख्यमन्त्री कार्यालयम पठाइएको ।
टाटा सफारी, टाटा जेनोन र फाइभएस स्कार्पियो गरी तीनवटा गाडी मन्त्रालयले प्रयोग गरिरहेको ।
१६ वटा गाडीको मूल्य ६ करोड २९ लाख ९५ रुपैयाँ खर्च गरेको ।
३. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
तीनवटा गाडी खरिद
मन्त्रीका लागि ६९ लाख ५४ हजारको स्ट्रोम गाडी खरिद गरिएको
दुई टाटा जेनुन पिकअप किनिएको
एक करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च
४. प्रदेश सभा सचिवालय
सातवटा स्कोर्पियो गाडी खरिद ५५ लाख मूल्यका
चारवटा विषयगत समितिका सभापति र दलका सचेतकहरूका गाडि खरिद
तीन करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्चिएर स्कोर्पियो खरिद गरिए
५. भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
जम्मा गाडी ११ वटा
बोलेरो पिकअफ ६ वटा २४ लाख मूल्य पर्ने
स्कारर्पियो ४ वटा ५६ लाख मूल्य पर्ने
मन्त्रीका लागि एउटा ६९ लाख पर्ने
६. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
जम्मा गाडी ६ वटा
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका लागि २
कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लागि १
र मन्त्रालयका लागि तीनवटा
७. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
१६ वटा गाडी खरिद गरेको छ ।
मन्त्रीका लागि ६९ लाख ६ हजार रुपैयाँमा टाटास्ट्रोम गाडी
३ महाशाखा र १२ वटा विषयगत कार्यालयका लागि बोलेरो गाडी खरिद
तीन करोड ५० हजार रकम खर्च गरेको छ ।
#एम्बुलेन्स # कर्णाली